Semalt - Indlela yokujongana nogaxekile ngempumelelo?
Ugaxekile ngumcimbi oqhelekileyo ojongene nabasebenzisi abaninzi be-intanethi. Ngokuqhelekileyo, imiyalezo yogaxekile ivelaabantu abaneenjongo zokugula ezifana nobuqhetseba kunye nokukhwabanisa. I-imeyli ye-Spam iqulethe izinamathiselo, ii-URL okanye enye imiyalelo ye-call-to-actionukwenza ixhoba liveze ulwazi oluxabisekileyo kwi-spammer. Ugaxekile uthatha izigidi zewebhu kunye nolunye ulwazi oluthile.Yonke ishishini-ishishini, ishishini okanye umsebenzisi we-intanethi kufuneka ahlale kude nogaxekile.
Unokuphuma kude nogaxekile usebenzisa izicwangciso nezenzo, ezinikezwa nguJack Miller,Umphathi weMathematika oPhumeleleyo kuMthengi iSemalt ,njenge:
Khusela idilesi yakho ye-imeyile.
I-spammers yam yegolide yoluhlu lwamakheli e-imeyile. Uninzi lwabagaxekisi bajolise ekuqokeleleniuludwe lweedilesi ze-imeyile abathumela ii-imeyli eziphambili ze-spam. Ukuhlaselwa okuphambili kogaxekile okuza kufaka phakathi kwabo kwiiwebhusayithi ze-porn.Ukugcina i-imeyile yakho iphephile ingaba nembono oluhle. Kubantu abane-website okanye abantu abanomsebenzi onzulu we-intanethi, badala i-imeyile ezininziiakhawunti ukwenza imisebenzi eyahlukileyo ingaba nembono oqaqambileyo. Ngenxa yoko, uninzi lwezihlaselo zogaxekile zijolise kuphela kwi-imeyile enye engekho.
Kukho izihlunu zogaxekile ezingakhusela ibhokisi lakho lemiyalezo kwimimiselo ethileuhlobo okanye umthumeli. Iinkqubo ezininzi zokulawula umxholo zihlalutye zogaxekile ezingakukhusela kwii-imeyili eziqhelekileyo zogaxekile. Iwebhusayithi ye-imeyile njenge-Outlookkunye ne-Gmail inezihlungi zogaxekile ezinezinga eliphezulu lokusebenza kodwa likhululekile. Ngenxa yoko, unokufumana inzuzo kwi-utility anti-spam.
Musa ukuphendula kugaxekile.
I-Spammers ingasebenzisa zonke iintlobo zobuqili ukwenzela ukuchofoza ikhonkco kwi-imeyili okanye umyalezo.Ezinye zeendlela eziqhelekileyo ziquka iqhosha elibonisa ulwazi olunjenge "cinezela apha ukuba ungabhalisi". Ukuchofoza nantoni na eqinisekisa ukubaspammer ukuba idilesi ye-imeyile isebenze, kwaye umsebenzisi usebenzisa idilesi ye-imeyile. Ngaphezu koko, ingaba neqhagamshelo kwiwebhusayithi eyingozi,nto leyo eyenza ixhoba lisengozini.
Musa ukuvula izinamathiselo.
Akukuhle ukuvula izinamathiselo ezikhoyo kwiimeyile zama-spam. Ezi ziqhotyoshelweyo zinakhoiqulethe ii-virus ezifana neTrojans. Kujoliswe kule malware kunye neenambuzane ekuthintela ikhompyutha yomsebenzisi ojoliswe kuyo. Baqokelela ulwazi oluxabisekileyonjengamazwi okupasa ibhrawuza okanye udibanise iikhomputha ezininzi zobuqu. Nasiphi na isinamathiselo esikhoyo kwi-imeyli yogaxekile kufuneka ihlale apho. Kukho nawuphi na, cimanayiphi na i-imeyile yogaxekile ngokukhawuleza.
Ukuba udibana ne-imeyile oqinisekileyo ukuba ugaxekile, kufuneka uphawule njengokuba ugaxekile. Okuumlinganiselo wenza ukuba uthathe inxaxheba kwinkampu yokupheliswa kogaxekile, ukwenza ukuba inani lakho lenkxaso. Ngenxa yoko, pha kamisa i-alamu ngaphambi kokuba uphumeubunzima bokugcina omnye umntu.
Ugaxekile uba yingxenye yomsebenzisi we-intanethi yansuku zonke. Abantu abaninzi bawela ugaxekile njengayeabadobi okanye abantu abanee-imeyile eziqulethe ii-imeyile. Kwiimeko ezininzi, i-spammers ijoliswe kumawebhusayithi, ama-admins, okanye i-akhawunti yomsebenzisi aphouthathe idatha efana nolwazi lwekhadi lesikweletu somthengi. Ukuhlala kude nogaxekile kubalulekile. Abasebenzisi banezakhono ezifanelekileyo zokugcina ugaxekile. Ezinye izikhokelokwiindlela ezilungileyo zokuphepha ugaxekile kule khokelo. Ngaphezu koko, kukho ezinye iindlela ezintle zokujongana ne-imeyli yogaxekile. Awukwazi ukuwaugaxekile ekubeni uhlaziye iinjongo zakho kunye nokujolisa.